Kenya ama Soomaaliya : Yaa leh badda. (Warbixin Muhiim ah)
Tawfiiq Farhan Tfc
Muddo sanado ah , Kenya iyo Soomaaliya ayaa ku Murmayey halka uu marro xuduudka badda ee u dhaxeeya Badweynta Hindiya. Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda Heeg (Hague) ayaa hadda go’aan ka gaadhaysa labada wadan midka leh badda, go’aankan oo ku haboon kaliya mid.
Xaggasha Saddex geeska ah xeebta Africa , ee Badweynta Hindiya , oo gaadhaysa 100,000 square kilometers ( 62,000 square miles ) , waa lafdhabarta Muranka u dhaxeeya dalalka deriska ah ee Kenya iyo Soomaaliya . Labada dal waxay doonayaan aaggaas, maxaa yeelay waxa sida la filayo uu leeyahay ceelal badan oo ah saliidda iyo gaaska , laakiin ma cadda mid kale labada wadan meeshaas.
“ Booskaas soohdintu waa meel midabkeedu yahay madaw iyo caddaan , “ ayuu yidhi Timothy Walter , oo ah cilmibaadhe khilaafkaadka xuduuddaha badda ee Machadka Daraasaadka Ammaanka ‘’ Institute for Security Studies’’ (ISS) ee Koonfur Afrika .
Kenya Marka la eego , si kastaba ha ahaatee , soohdinta waa arrin cad . Waxaa isku xidha laba line oo ku beegan line-ka loolka . Taasi Kenya waxay siinaysaa saamiga weyn ee aagga badda. Waxaany horre uga iibisay liisanka macdanta shirkado caalami ah . balse soomaliya ku gacan saydhay.
Soomaalidu waxay doonayaan soohdinta in loo balaadhiyo xagga koonfur bari. Sanadkii 2009 , labada dal waxay ku heshiiyeen in guddida Qaramada Midoobay ee mas’uul ka ka ah dhexdhexaadinta khilaafaadka xuduudaha in ay go’aamiso line-ka soohdinta hal mar uun . Waxay sidoo kale isku raaceen in ay tahay in ay sii wadaan wada shaqayn si xal loo helo si arrintani ay san u tagin maxkamad.
⚫ Dacwada Somaliya, Cabashada Kenya.
Tani uma muuqato in ay ka shaqeeyeen — ugu yaraan marka laga eego Soomaaliya . 2014 kii , Soomaaliya ayaa Kenya ka dacweysay Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ( ICJ ) ee Heeg (Hague) . Maxkamaddu waxay u taagan tahay hal wado oo ay ku xalinayso khilaafka xadka badda, haddii isku dayga labada geesood ama gobal fashilmaan.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa qortay dacwaddeeda sheegashada. Taas weeyi dhab ahaanti waxa dhacay “ labada dhinac ayaa kulmay marar badan si ay uga wada hadlaan sida khilaafka loo xallin karo . bal se wax horumar ah oo la sameeyey ma jirto, mid ka mid ah kulamadii. “ Xukuumada ayaa sidaa tidhi
Soomaaliya ayaa muddo dheer loo arkayey dal fashilmay oo aan lahayn xukuumad shaqaysa.
Waxay leedahay oo kaliya madaxweynahe la soo doortay mar kale, tan iyo 2012 oo haatan u muuqataa mid walaacsan in ay ilaaliyso waxa u tixgalinayaa xuquuqdeeda madaxbanaanida ee Badweynta Hindiya ..
Soomaaliya waxay doonaysaa in Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda( ICJ) ay qeexdo soohdinta sida uu dhigaayo Heshiiska sharciga qaramadi midoobay ee badda iyo sharciyada kale caalamiga ah ee badda .
Goobtan lagu muransan yahay , Xuduud ku meel gaadh ah ayaa la samayn doonaa, line-ama xariiijin fog isla labada xeebood, haddii aanay soo bixin wax caqabado ah. mid tijaabo ah ayaa ka dibna la fulinayaa si loo arko haddii xuduudku yahay mid cadaalad u ah labada dhinac ama hadii ay faa’ido ama faaido daro u tahay mid kale. waa suurad wanaagsan. Walker ayaa yidhi.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Kenya ayaa, waxaa u calaamadsan xuduudkan .ku dhawaad ​​100 sano , waxa ay u arkaysay line-kan ama xariiqan xuduudkeeda , dowladda ayaa qortay .
Tan iyo markii Kenya iyo Soomaaliya ay isku raaceen in ay xalliyaan khilaafka u dhexeeya iyadoon maxkamadda la gaadhin , Kenya ayaa ka soo muuqatay maxkamada 2015 dacwad lagaga soo horjeedo . Maxkamadda ayaa hadda doonaysa in ay dhagaysato labada dhinac , laga bilaabo Isniinta September-2016 ka dibna go’aan ka gaadhi doonta in ay bilaabanto dacwadu .
⚫ Kaliya Hal Guuleyste
Haddii dacwada maxkamadda la furro ,  go'aanka soohdinta wuu  dhammaanaya.  Walker ayaa qaba in  kiiska maxkamad halis sarre u yahay  labada dalba . " Haddii ay maxkamaddu  go'aamiso oo ay ku guulaysato dacwada Somalia , xadka Kenya ee badda wuu kala firdhayaa , " ayuu yidhi .
Tani waxay keeni kartaa in muran weyn oo xuduudda badda ahi soo dhex galo wadanka koonfuurta la deriska ah Kenya ee Tansaaniya , taas oo iyana ku yeelan karta saameyn weyn, Mozambique , Madagascar iyo South Africa .
Isu tanaasulku waa suurto gal , dabcan , ugu yaraan hal aragti : “ Labada dal way wadaagi karaan degaanka iyo macdanta alaabta qaydhin , “ ayuu yidhi Walker . Waxa uu sheegay in uu jiro tusaale wanaagsan Galbeedka Africa , halkaas oo Nigeria iyo jasiiradaha ee Sao Tome iyo Principe ay soo wada saaraan saliid .
Hasa ahaatee Soomaaliya iyo Kenya , Walker ma arko wax fursad ah . “ Labada dal ma rabaan in la sameeyo tanaasul marka ay timaado xuquuqda ay madax u banaanida mid kastaa sheeganayo . Taasi way is beddli kartaa, bal se xilligan la joogo, waxay u muuqataa mid uun ama go’aan , “ ayuu yidhi. Walker ayaa ku qiyaasay in go’aanka lahaanshiyaha la sameyn doonaa sanadka soo socda .
⚫ Dhamaadka indho La’aanta Badda.
Guud ahaan , khubarada sida Walker ayaa ku qiimaynaya in isbedelka sii kordhaya dadka gobolku , gaar ahaan Africa , ay sahasho dejinta soohdintooda badda . Walker waxa uu ugu yeedhay “ dhammaadka badda indho la’ . “
“Inta badan dalalka Afrika waxa ka maqan ciidamada badda ama ilaalada xeebaha. isku dhacyo badan ayaa ka dhacay xuduudaha dalalka ama xadka dalalku wadaagan . Taariikh ahaan , waxaa had iyo jeer diiradda la saari jiray waxa ka dhacaya uun xuduudaha dhulka, bal se Hadda, taasi way is beddeshay, waxa aad iyo aad u badan ee aynu arkaynaa waxa weeyi khayraadka badda oo hadda la heli karraayo iyadoo la adeegsanaayo farsamo aad u sarraysa. Ayuu yidhi ‘’ Walker.
Dhanka galbeed ee qaaradda , Ghana iyo Ivory Coast ayaa ku jira khilaaf la mida kan u dhaxeeya Somalia iyo Kenya oo ku saabsan soohdinta u dhaxaysa ee xeebaha badweynta Atlantic . Labada dal ayaa hadda sugaya go’aan Maxkamadda Caalamiga ah ee sharciga bada iyo Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda , Taas oo lagu xaliyo khilaafaadka xadka u dhexeeya dalalka is khilaafsan.
Dalalka deriska ah ee Bariga Africa Malawi iyo Tanzania ay sidoo kale muran xuduud dhexyaalaa , markan waa Harro, Harrada Malawi waxay xad la leedahay Tanzania, waxaana ku yaala xaddi weyn oo kayd shidaal.
Wadamadani maaha kuwa kaliya ee eeggaya sida uu u socdo khilaafka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaliya.
📝 Turjumidii: Tawfiiq Farhan
· Date(Taariikhda) 21.09.2016
· Author (Qoraa): Friederike Müller-Jung / abj
· Related Subjects (Macluumadka la xidhiidha) OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries), International Court of Justice (ICJ), Kenya
· Keywords (Erayada Furaha ah) Africa, Kenya, Somalia, boundaries, maritime boundaries, border conflicts, oil, Indian Ocean, International Court of Justice
· F.G: Wixii qaladaad ah ee xagga luuqada afsoomaliga ama turjumiduu waa inta aan luuqada soomaliga aan aqoon u leeyahay. Ciladaha farsamo ee Hab qoraalka ma sheegin.
F.G: Wixii qaladaad ah ee xagga luuqada afsoomaliga ama turjumiduu waa inta aan luuqada soomaliga aan aqoon u leeyahay. Ciladaha farsamo ee Hab qoraalka ma sheegin.
Never miss a story from Tawfiiq Farhan Tfc, when you sign up for Medium. Learn more
Never miss a story from Tawfiiq Farhan Tfc